EA inovhura kodhi yekodhi ye Command & Conquer | Linux Vakapindwa muropa
EA ndeimwe yemahodhi makuru emitambo yemavhidhiyo, uye Raira & Kunda yaive imwe yemazano ake echinyakare. Mutambo wevhidhiyo uyu wakaita mamirioni evashandisi kudedera nemusoro uyu, sezvakaita Dune 2000, Diablo, The Settlers, Age of Empires, kana War Cry. Pasina kupokana, mitambo yakabata vazhinji vanoda zano.
Zvakanaka, nguva pfupi mushure mekuraira & Kukunda Remastered Unganidzo yatanga kutengeswa kuChitoro neValve's Steam chitoro, EA yakashamisika nechiziviso. Uye ndizvozvo ipa kodhi yekodhi yenharaunda. Icho chinangwa ndechekuti ivo vanogadzira vanogona kusunungura izere kugona uye kugadzira ma mods emutambo uyu. Uye ini handizive kana izvozvo zvichikonzera mamwe mapurojekiti, maforogo, nezvimwe.
Izvi uye chokwadi vachasimuka mitsva mitsva kubva Command & Kunda kubva 1995, neMODs nyowani uye pamwe zvakare kuendesa kune GNU / Linux natively. Kunyangwe iyo yekupedzisira iri kungorota, asi zvingave zvisina kunaka. Nekudaro, mune iyo Steam mutengi iwe unotoziva kuti une Proton huru yekuita kuti zvinhu zvive nyore kwauri kunyangwe zita rechizvarwa risipo ...
EA ikozvino ichapa raibhurari ine simba TiberanDawn.dll (C&C: Tiberian Dawn) uye RedAlert.dll (iyi yezita rayo reRed Alert ra1996, imwe yeiyo C & C shanduro) Kune rimwe divi, iyo inopa kodhi yekodhi ye Command & Conquer rezinesi pasi peGPLv3.0. Ndokunge, ichave isiri yekuvhura sosi chete, asi zvakare ichave yemahara software.
Kune mamwe zviitiko zvinonakidza, senge iyo yePetroglyph studio, yaive nechekuita neWestwood Studios saga (yaive yeElectronic Arts, uye yakavharwa muna 2003), iyo yakagadzira GDI Mammoth yakagadziridzwa sekunge yaive iyo NOD. Izvo zvinobvumidza iyi Mammoth kuve nekwanisi yekudonhedza mabhomba enyukireya kubva mudhiramu rayo. Kugona kutsva kwaakange asina kare ...
Sosi yepamutemo - EA Blog
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » EA inovhura iyo yekuraira & Kunda kodhi kodhi